နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: အိန္ဒိယ ၅ (ဒေလီ ၊ အဂါရာ)
အိန္ဒယကို ရောက်ကို ရောက်ဖူးချင်တာ။ ပျော်စရာကြီးနော်။
ကဲဗျာ ကွန်လည်းကောင်းတာနဲ့ ပထမဆုံးရောက်လာတယ် အိန္ဒိယအလည်တစ်ခေါက်
ဒါနဲ့ ဘာတွေများ ..ဝယ်လာသလဲဗျ :)
ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားတယ် ထင်ရလောက်အောင်ကို ဓာတ်ပုံတွေက ပြည့်စုံပါတယ်ဗျာ။ ဗဟုသုတလေးတွေ ဝေမျှပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးနော်။
အိန္ဒိယရဲ့ အနုပညာထိန်းသိမ်းမှုကတော့ ကိုယ်တွေထက် သာပါတယ်။ သူတို့က ရိုးရာ အစွဲကြီးတာလဲ ပါမယ် ထင်တယ်။
ရောက်ဖူးချင်တဲ့ နေရာထဲမှာလည်း အဲဒီနေရာပါတယ်။
အခုတော့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါပဲ။
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တာခ်ျ့မဟာကို ရောက်သွားခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာဘဲ။
lotus temple ကလည်း ဒီဇိုင်းက အတော်မိုက်တယ်.
ပညာလည်း သင်ခွင့်ရ။ အလည်အပတ်လေ့လာရေးလည်း သွားခွင့်ရ
ပုံတွေတိုင်းမှာ အရိပ်တစ်ခုပါနေသလိုပဲနော်.. ပထမတော့ တောင်ရဲ့အရိပ်များလားလို့.. နောက်တော့ ပုံတိုင်းတွေ့နေရတော့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်လိုက်တာ... မှန်မှာ တစ်ခုခုကပ်နေလို့လား... :D
တကယ်ရောက်သွား သလိုပါပဲ။ ခရီးသွားရတာ ဝါသနာ
ပါတာမို့ ခုလို ခရီးသွား Post လေးတွေမြင်တိုင်း
အားကျမိတယ်။ ဗဟုသုတလေးတွေလည်း ယူသွားတယ်။
ပုံတွေ သိပ်ကောင်းတာဘဲ သေချာကြည့်သွားတယ် ပျော်စရာကြီး
ဒေလီက ၂၀၁၁မှာ မြို့သစ်တည်နှစ်၁၀၀ပြည့်ပွဲနဲ့ အခု ၂၀၁၀မှာ Commonwealth Gameအတွက် ပြင်ဆင်နေလိုက်တာ တမြို့လုံး ကြွက်တွင်း တူးထားသလိုပဲဗျ။
နိုင်ငံတကာ အားကစားသမားတွေက game villageတွေ ညစ်ပတ်တယ်ပြောတော့ တာဝန်ခံ ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးက မှတ်သားစရာ...
"See everyone hasadifferent standard of cleanliness. The rooms of the Games village are clean according to you and me, but they have some other standard of cleanliness."
ဒေလီမှာက မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ ၅ပုံ၁ပုံလောက် ရှိတာမို့ စိတ်ရောကိုယ်ရော ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ဒေလီထက်စာရင် ချန်ဒီဂတ်မှာ နေရတာ အတော် အေးချမ်းပါတယ်...။
ဒေလီကိုလဲ ဆက်လာလည်သွားတယ်။း)
Lotus Temple က ဘာသာတိုင်းအတွက် ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့လဲ ကောင်းသလို အိုင်ဒီယာလေးလဲ ကောင်းတယ်နော်။
Lotus လို့ နာမည်ပေးထားတာလေးကိုလဲ သဘောကျမိတယ်။